Mandrahona ny hanisy sivana ny fitsikerana ny Praiminisitra an-tserasera i Thailandy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Avrily 2019 4:12 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana May 2013 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Feno dia feno ny fandaharam-potoanan'ny governemanta Thailandey tao anatin'ny iray volana raha ny momba ny fanaraha-maso ny vaovao anaty aterineto no resahana. Ankoatra ny fanenjehana ilay mpanao sariitatra Thailandey Rath Chai Rachawat noho ny fanalam-baraka dia nandrahona ny hanakatona ireo tranonkala izay manevateva ny Praiminisitra ny governemanta ao Thailandy.
Nandefa sary tao amin'ny Facebook i Chai Rachawat niaraka tamin'ny fanazavana niteraka resabe manakiana ny Praiminisitra Yingluck Shinawatra:
Azafady fantaro fa tsy vehivavy ratsy ny mpivaro-tena. Mivarotra ny vatany fotsiny ny mpivaro-tena, fa ny vehivavy ratsy dia mivezivezy mitady ny hivarotany ny firenena.
Ilay lahatsoratra tao amin'ny Facebook nampiady hevitra navoakan'i Chai Rachawat. Sary avy amin'ny pejin'ny bangkokpundit Flickr.
Naneho hevitra tamin'ny lahatenin'i Yingluck tany Mongolia ny volana Aprily 2013 i Chai Rachawat. Yingluck no Praiministra vehivavy voalohany tao Thailandy. Zandrivavin'ny praiminisitra teo aloha Thaksin Shinawatra ihany koa izy izay nesorina tamin'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 2006. Voaheloka noho ny fandrobana ary monina any an-tsesintany ivelan'i Thailandy i Thaksin .
Nandritra ny antsafa nifanaovana tamin'ny Bangkok Post, nanazava ny antony nanaovany ilay fanamarihana nampiady hevitra i Chai Rachawat:
Nanohina ny fon'ny maro ny kabarin'ny Praiministra tany ampitan-dranomasina. Tsapan'izy ireo fa nodisoana ny zava-misy momba ny demaokrasia any Thailandy mba hanadiovana ny anadahiny sy ny fianakaviany.
Toy ny mamadika ny firenena ny firesahana miiba momba ny firenenao manokana. Mahatonga ireo vahiny hihevi-diso momba an'i Thailandy izany.
Nanao fahadisoana roa ny Praiminisitra: ny filazana zavatra tsy misy sy ny fandaingana.
Nanazava ihany koa izy fa tsy nanondro an'i Yingluck ho mpivaro-tena izy:
Ny tiako holazaina dia hoe tsy ratsy ny mpivaro-tena satria mivarotra ny tenany izy ireo, fa tsy ny firenena. Na izany aza, ratsy ny vehivavy izay mivarotra firenena. Tsy nanonona ny praiminisitra ho mpivaro-tena aho.
Nohenjehina noho ny fanalam-baraka sy noho ny fanitsakitsahana ny Lalàna momba ny Heloka An-tserasera any Thailandy i Rachawat na dia teo aza ny fanazavany. Napetraka tamin'ny Andro Manerantany Ho an'ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety ilay fitoriana.
Mihevitra i Bangkok Pundit, bilaogera, fa hevitra tsy mety ny fitoriana:
Tena hevi-diso amin'ny lafiny politika sy amin'ny ambaratonga rehetra ity fitoriana ity … Vao mainka handratra an'i Yingluck mihoatra noho izay mety handratra an'i Chai [izany]. Tokony hanala ny fitoriana i Yingluck .
Tsy mbola nisy teo aloha tany Thailandy ilay fitoriana, satria vao voalohany tamin'io no nisy Praiminisitra nitory olom-pirenena tamin'ny fanalam-baraka mifandraika amin'ny lahatsoratra Facebook. Ny mahazatra any Thailandy dia ny raharaha Lèse Majesté hanenjehana ireo bilaogera sy ireo mpaneho hevitra amin'ny aterineto izay manevateva ny fianakavian'ny Mpanjaka, anisan'izany ny fanakanana tranonkala mitsikera ny fitondram-panjaka.
Taorian'ny fitoriana an'i Chai Rachawat, nampitandrina ny Minisitry ny Serasera sy ny Teknolojiam-baovao fa hikatona avy hatrany ny tranonkala misy fanamarihana manala-baraka atao amin'ny Praiministra. Nandrisika ny olom-pirenena izy mba hitatitra ireo vohikala misy votoaty manafintohina.
Nangataka ny governemanta Thailandey hanitsy ny lalàna Lèse Majesté, izay nofaritana ho henjana indrindra eran'izao tontolo izao ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona Manahy ihany koa izy ireo mikasika ny lalana sasantsasany ao amin'ny Lalàna momba ny Heloka An-tserasera izay heveriny ho mora hanaovan'ny manampahefana fanararaotana mba hikendrena ireo mpanohitra sy ny mpikambana ao amin'ny vondrona mpanohitra politika.
Azo antoka fa hisy fiantraikany goavana eo amin'ny fahalalahan'ny aterineto sy ny fandrindrana ny aterineto ao Thailandy ny fanamarihan'i Chai Rachawat feno fihantsiana, na diso izy na tsia.
05 Jona 2021Azia Atsinanana
Vehivavy mpitarika miresaka fanentanana amin'ny zo nomerika ao Thailandy